Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-ekwupụta Mgbasawanye na Curaçao
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Curacao » Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-ekwupụta Mgbasawanye na Curaçao
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Curacao • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Resorts • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Curacao
Sandals Resorts International (SRI), ndị ndu ụwa mgbako dum ụlọ ọrụ, kwupụtara taa ịbịanye aka na nkwekọrịta ga-eweta Sandals® Resorts gaa ebe ọhụụ ọhụrụ, na Santa Barbara Resort na agwaetiti Curaçao.
Nke a ga-ama akara agwaetiti nke itoolu maka akara na mpaghara Caribbean. Ọhụrụ Akpụkpọ ụkwụ Curaçao ga-ebu ụzọ gụnye ụlọ ndị mara mma na ọmarịcha narị atọ na iri atọ gbasaa n'akụkụ mmiri mmiri Spanish na Oke Osimiri Caribbean, na-agbasawanye atụmatụ ha n'afọ ndị na-abịanụ. Ebe gara aga Santa Barbara Beach & Golf Resort, akụkụ nke mmepe 350-acre sara mbara, ebe ezumike a ga-abụ "Sandalized," usoro ga-amalite na 3,000.
Sandals Curaçao ga-eweta ọtụtụ ihe ndị ọhụrụ na-eme njem n'àgwàetiti ahụ, nke ghọwo otu ihe a ma ama na ama ama ama ama ama ama na mpaghara mpaghara a. Atụmatụ ebumnuche maka ebe a gụnyere itinye isi ihe maka mbinye aka na akpụkpọ ụkwụ Sandals, gụnyere ọdọ mmiri ọhụụ sara mbara, ọtụtụ 5-Star Global Gourmet options nhọrọ iri nri na ebe obibi mara mma, gụnyere ọmarịcha ewu mmiri ọhụrụ. Ndị ọbịa ga-enwetakwa ohere ịga golf golf nke 18-hole agbataobi, marinas abụọ na 38,000-square-ụkwụ nke ime ụlọ na n'èzí n'èzí, nke kachasị na agwaetiti ahụ.
World-ama ama maka ọdịbendị ya mara mma, oke osimiri dị egwu na coves, Curaçao na-ekwupụtakwa ebe nrụọrụ mmụba dị egwu na gburugburu ebe obibi mmiri. Site na afọ okpomọkụ nke ogo 80, a na-akọwa ya dị ka onye zuru oke oge-mgbapụ. Ebe ezumike a ga-enwe mmetụta dị mma, ozugbo na ogologo oge na agwaetiti ahụ na ndị Curaçao. N'ime otu afọ naanị, a na-atụ anya inwe akara nde akụnụba karịrị nde $ 40 yana ndekọ egwu dị egwu banyere ịmepụta ọrụ ọhụrụ. Nanị ebe a ga - agbakwunye ọrụ karịrị mpaghara 1,200, nke gụnyere ndị otu ọhụụ 800, yana ndị ahịa 400 na ndị omenkà mpaghara. Nke a ga - esochi ezigbo mmetụ akụ na ụba maka obodo na - agbakwunye na tagzi na njem ụgbọ njem, usoro nnyefe, ọrụ ugbo, mmụba ụgbọ elu na ọnụọgụ njem nlegharị anya kwa afọ-ọkachasị na isi ahịa ahịa njem US.
Roald Smeets, Director nke Santa Barbara Beach & Golf Resort kwuru, sị: “Anyị nwere ohere pụrụ iche iji dọta onye ọrụ ụlọ nkwari akụ a ma ama n’ụwa niile, onye nwe ya na ọchụnta ego dị ka Sandals Resorts, nke ga-ewetara ụlọ ọrụ njem njem Curaçao na-enweghị atụ ụdị ahịa akụ na ụba obodo. Ọnọdụ ya dị ka onye na-arụ ọrụ na onye nwe ụlọ na onye nwe ya, yana ikike iji dọta ụgbọ elu ụgbọ elu oge niile site na North America, na-egosipụta ya nke ọma site na otu ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Anyị chọtara atụmatụ ya dị oke egwu maka saịtị ahụ na nraranye maka iwulite profaịlụ nke Curaçao dị ka ebe njem nlegharị anya nke ụwa na-atọkarị ụtọ. Ulo oru ya n’ime obodo ga eme ka ndi ahia njem nleghari anya, kwenye ndu nke otutu nari ezinulo ma baara onye obula n’ime agwaetiti ahu uru site n’itighachi aku na uba obodo. Curaçao nwere ọdịnihu magburu onwe ya n'ihi ọrụ ọhụụ a na-akpali akpali, nke ga-etinye Curaçao n'ezie na ụwa niile.
Sandals Resorts International guzobere na Onye isi oche, Hon. Gordon “Butch” Stewart, ya na osote onye isi oche Adam Stewart, nwere nke a ịkekọrịta: “Ọ bụ nnukwu ọ pleasureụ anyị na-arụkọ ọrụ na gọọmentị nke Curaçao na ezinụlọ Smeets na mbọ ọhụrụ a na-akpali akpali maka akara akpụkpọ ụkwụ,” Gordon kwuru Butch ”Stewart. “Anyị chọrọ igosipụta ekele miri emi anyị nwere n’ebe Roald Smeets nọ, bụ onye nyeworo aka na usoro a ma nwee ọfulụ iso ya rụ ọrụ. Anyị na-eme atụmatụ ime karịa nke anyị iji bulie ekele ụwa maka obodo a mara mma. ”
Adam Stewart gbakwụnyere, sị: “Oge ọ bụla anyị gbasawanyere, anyị na-eji ike nke afọ 40 anyị ga-ele ọbịa leta anyị. Sandals ọhụrụ Curaçao na-egosipụta nkà ihe ọmụma anyị nke ntụgharị uche na-ele anya site na oghere ọhụrụ. Ọ bụ nkwa ọ bụghị naanị nye ndị ọbịa anyị mana ndị otu anyị maka ịnwe ọhụụ. Curaçao bụ ebe a ga-achọpụta ya, anyị dịkwa nganga taa ịb ụ akụkụ nke obodo a.